umshini wokupakisha othomathikhi we-pellet ozenzakalelayo onesisindo kanye nomthungo
Amandla:0.37kw + 0,37kw
Ikhono:400~ 800bag / h
Isetshenziselwa:ukupakisha okusanhlamvu ,ukupakisha i-pellet,ukupakisha granular
Umsebenzi:isisindo esizenzakalelayo,ukubeka uphawu nokuhamba
umshini wokupakisha othomathikhi we-othomathikhi ungumshini omusha wokupakisha olithuthukisiwe,yamukela ezenzakalelayo ezenziwa ngekhompyutha & lawula ubuchwepheshe-uchwepheshe. Kusetshenziselwa isisindo kanye nokupakisha ama-pellets wokudla ngaphakathi umugqa wepellet wokudla ukusindisa abasebenzi. Ngokujwayelekile, umshini wokupakisha othomathikhi we-pellet uhlala uhlanganiswa nebhande lokuhambisa kanye nomshini wokuthunga ,okungabumba uhlelo oluzenzakalelayo lokuphakela ama-pellet kanye nokupakisha okusetshenziselwa amafektri okuphakelwa kwezilwane.
I-othomathikhi Yokufaka Umshini Wokufaka Pellet
Umshini wokupakisha othomathikhi we-pellet othomathikhi ulungele izitshalo zokukhiqiza ezinkulu zaphakathi nendawo nezinhlobonhlobo. umshini wokupakisha i-feed pellet uhlala usetshenziswa ohlelweni oluzenzakalelayo lokufaka isisindo nopakisha, kuhlanganiswe nomshini wokuhambisa nomshini wokuthunga. Umshini wokupakisha othomathikhi wokuphaka othomathikhi unesicelo esisetshenziswa kabanzi ,njengama-feed pellets, izinkuni pellets, okusanhlamvu,okokufaka umanyolo nokunye okuphathelene nezinhlayiyana nezinto ezibonakalayo zikafulawa onamanzi amaningi. Ngomsebenzi omuhle kakhulu, yamukelwe amafektri amaningi amakhulu wokukhiqiza ama-pellet.
Izici Zomshini We-Pellet Weighting Packt wokuphakelayo
1.Umshini wokupakisha ophaqa isisindo wokuphakelwa ugcina ukuxhumana, wonke umshini ukwazi ukusebenzisa ukuxhumana kwedijithali ngomshini ongaphezulu kulayini wokukhiqiza we-feed pellet.
2.Umshini wokupakisha i-pellet othomathikhi unezinzuzo zokubala ngokunemba okuphezulu, umsebenzi ozinzile, ukubonakaliswa kwedijithali nokusebenza okulula.
3.Ukuhlomisa isoftware yekhompyutha yokulawula, umshini wokuphakisha we-feed pellet kanye nomshini wokupakisha uyatholakala ngokulawula idatha,ukulahla ukuphakama okuzenzakalelayo, iphutha lokutholwa okuzenzakalelayo.
4.Ukwamukela isistimu yokusebenza kwesisindo esiyimpinda. Izinsimbi ezimbili zingasebenza ngokuvumelanayo noma umuntu ngamunye, ezothuthukisa ukusebenza kahle komshini onesisindo nomthwalo wokupakisha.
5.Kusetshenziswa inzwa esezingeni lomhlaba esezingeni eliphakeme kanye ne-pneumaticatorsators, umshini wokuphakisha we-feed pellet kanye nomshini wokupakisha usebenza ngokuthembekile, ngaphandle kokungcola.
6.Indawo engaphandle isebenza ubuchwepheshe bokufafaza beplastiki ngaphandle kwangaphakathi bufaka insimbi yensimbi engenacala, ngokumelene nokugqwala nokugqwala ngaleyo ndlela kwandisa impilo yenkonzo yomshini.
othomathikhi wokufaka umshini wokupakisha we-pellet
Imodeli Ububanzi besisindo Ukupakisha umthamo Ipaka ukunemba Ubukhulu
VTDCS25 5-25KG 500-900izikhwama / hr ± 0.2-0.5% 720X630X2600mm
VTDCS50 25-50KG 400-800izikhwama / hr